Wed, 01/13/2021 - 07:35
ပြည်သူလူထုအခြေပြု ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေး ရပ်ရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းတွင် အမျိုးသားအဆင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းဦးဆောင်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
ပြည်သူလူထုအခြေပြု ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေး ရပ်ရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းတွင် အမျိုးသားအဆင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းဦးဆောင်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး…
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ကျန်းမာရေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာမူဘောင် မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနား တက်ရောက်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ကျန်းမာရေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဆိုင်ရာ
အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာမူဘောင် မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနား တက်ရောက်
နိုင်ငံအဆင့် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းသယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီ ဆဋ္ဌမအကြိမ်အစည်းအဝေး ကျင်းပ
Wed, 01/13/2021 - 07:17
မန္တလေး-ကျောက်ဖြူ ရထားလမ်းသစ်ဖောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း ဖြစ်မြောက်နိုင်ခြေ လေ့လာမှုဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာ့မီးရထားနှင့် China Railway Eryuan Engineering Group Co.,Ltd.(CREEC) တို့အကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုး
Wed, 01/13/2021 - 07:15
မန္တလေး-ကျောက်ဖြူ ရထားလမ်းသစ်ဖောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း ဖြစ်မြောက်နိုင်ခြေ လေ့လာမှုဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာ့မီးရထားနှင့် China Railway Eryuan Engineering Group Co.,Ltd.(CREEC) တို့အကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ…
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကို ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည့် ပုဂံယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသရှိ ဘုရားများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု ကြည့်ရှုစစ်ဆေ
Wed, 01/13/2021 - 07:11
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကို ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည့် ပုဂံယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသရှိ ဘုရားများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာဝမ်ယိ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နေပြည်တော်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာ
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး
မစ္စတာဝမ်ယိ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နေပြည်တော်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာ
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ နေရပ်စွန့်ခွာရသူများ(IDPs)အတွက် ထောက်ပံ့လှူဒါန်းငွေ ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ
Wed, 01/13/2021 - 07:04
နေရပ်စွန့်ခွာရသူများ(IDPs)အတွက် ထောက်ပံ့လှူဒါန်းငွေ ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဝမ်ယိအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Wed, 01/13/2021 - 07:03
နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်ကစ၍ ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးတွင်ရေရှည်တည်တံ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စစ်မှန်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ ဖြစ်ထွန်းရရှိစေလိုနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံမှ ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးနေ့အတွက် ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်ကစ၍ ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးတွင်ရေရှည်တည်တံ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စစ်မှန်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ ဖြစ်ထွန်းရရှိစေလိုနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်…